सामुद्रीक आँधी फेनीको प्रभाव नेपालमा पनि | Suvadin !
के भन्छन् माैसमवीद ?
सामुद्रीक आँधी फेनीको प्रभाव नेपालमा पनि
काठमाडाैं, बैशाख १९ - बंगालको खाडीमा विकसित भएको सामुद्रीक आँधी फेनीबाट नेपाल पनि प्रभावति हुने भएको छ । समुद्रबाट भोली जमिनमा आइपुग्ने अनुमान गरिएको फेनी भारतको उडिसामा पहिले आइपुग्ने छ । त्यसपछि भारतका पश्चिम बंगाल र झारखण्डका केही भूभाग हुँदै नेपालमा यसको प्रभाव आइपुग्ने मौसमवीद वरुण पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार फेनीका कारण नेपाली पूर्वी भागमा शनिबार र आइतबार दिनभरी बद्ली र वर्षा हुने छ । काठमाडौंमा भने मौसम बद्ली हुने र क्षणिक वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको पौडेलले बताए । सोमबारबाट भने मौसम सफा रहने उनको भनाई छ ।
शुक्रबारबाट २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा फेनी आइपुग्ने भएपछि भारतले उडीसाको तटिय क्षेत्रका करीब ८ लाख बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारेको छ । बिहीबारसम्ममा पुरी आसपासको क्षेत्रबाट करीब ८ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । करीब दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टामा अगाडि बढिरहेको आँधीबाट सतर्क रहन तामिलनाडु र आन्ध्र प्रदेशमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।